Ahoana ny fanovana sary ho an'ny Instagram: programa sy fampiharana | Famoronana an-tserasera
Amin'izao fotoana izao, iray amin'ireo tambajotra sosialy izay lamaody ary miavaka amin'ny fanaovana laharam-pahamehana ny sary noho ny lahatsoratra dia ny Instagram. Samy manana kaonty ny tsirairay ary mampakatra sary, na dia ny kalitao ihany aza no mandresy. Izany no antony maro mitady tetika hahafantarana ny fanovana sary ho an'ny Instagram.
Raha ao anatin'izany fikarohana izany koa ianao ary te hahalala ny fomba ahazoana tombony betsaka amin'ny sarinao ao amin'ny Instagram (Mba ahazoanao mpanaraka bebe kokoa, mahamarika anao ny marika sns.) Avy eo jereo ny zavatra nomaninay.
1 Ny dingana voalohany hanavahana ny tenanao amin'ny sarinao amin'ny Instagram
1.1 Ny sivana Instagram izay manatsara ny sarinao
1.2 Safidy Instagram
2 Fampiharana hanovana sary ho an'ny Instagram
2.1 Ahoana ny fanovana sary ho an'ny Instagram: Instasize
2.4 Ahoana ny fanovana sary ho an'ny Instagram: Lightroom
Ny dingana voalohany hanavahana ny tenanao amin'ny sarinao amin'ny Instagram
Tsy "tambajotra sosialy kely" ny Instagram. Androany dia misy sary mihoatra ny 60 tapitrisa isan'andro, izay mahatonga ny hafatrao ho tsy hita maso raha tsy ataonao tsara. Ho setrin'izany, afaka mahatratra 500 tapitrisa ireo mpampiasa ianao izay ao aminy.
Ary ahoana no ahazoana azy? Na dia toa sarotra aza izany dia misy zavatra azo atao, tsy ny fomba fanovana sary ho an'ny Instagram ihany, fa ny lafiny hafa izay, indraindray, tsy raharahantsika, toy ny fampiasana ny habe mety amin'ny sary, na amin'ny horonan-tsary. Na maka sary misy kalitao ary mifandraika amin'ilay kaonty ananantsika.
Ny tanjonao dia tsy tokony ny maka sary haingana sy manantona azy ireo haingana. Fa omeo famaranana matihanina izy ireo. Ary tsy voatery hidika izany fa manana mpamorona ao aorianao hamerina ny zavatra rehetra, na ny mpaka sary matihanina; fa tandremo ny antsipiriany sasany toy ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny sivana sns.
Ny sivana Instagram izay manatsara ny sarinao
Alohan'ny hiresahana momba ny rindranasa manampy anao hamerina hamerina ny sary ho an'ny Instagram dia tsy maintsy fantatrao ireo fitaovana atolotry ny tambajotra sosialy anao, sa tsy izany? Amin'ity tranga ity dia mifantoka amin'ny inona ireo sivana izahay.
Ao amin'ny Instagram dia manana sivana voafetra ianao izay manatsara ny kalitaon'ny sarinao. Miankina amin'ny tsironao, misy ny sasany izay tianao bebe kokoa na latsaka. Ohatra, miaraka amin'i Clarendon dia manana feo mahery vaika ianao ao amin'ny aloka, izay manatsara ny jiro amin'ny sary. Na amin'ny LARK, izay manome sary anao amin'ny fanesorana ny saturation be loatra.
Ny sivana Instagram rehetra dia manova sy manatsara ny fisehoan'ny sarinao, fa misy ihany koa ireo masontsivana hafa afaka manatsara azy.
Rehefa mampakatra sary amin'ny Instagram ianao dia tsy vitan'ny hoe mamela anao hametraka sivana amin'ilay sary ianao; Ianao koa dia manana kodiarana mampiseho ny masontsivana misy ny sary, ary azonao atao ny manova azy ireo hanatsara ny kalitaony. Inona avy ireo masontsivana? Miresaka ny famirapiratana, ny fahavokarana, ny hafanana, ny fifanoherana, ny aloka ...
Raha mandany fotoana kely ianao hanovana ireo angona ireo dia afaka manova sary ho an'ny Instagram ianao fa tsy mila mametraka rindranasa hafa. Ohatra, amin'ny tranga maro, ny fampidinana ny famirapiratana, ny fifanoherana ary ny jiro hatramin'ny 50 dia efa manatsara be ny mason'ny sary. Fitsapana ny zava-drehetra mba hahitana hoe iza no safidy tsara indrindra isaky ny sary ampidirinao.
Fampiharana hanovana sary ho an'ny Instagram
Raha aleonao mampiasa rindranasa hamerenana sary ho an'ny Instagram fa tsy ireo safidy atolotry ny tambajotra anao, dia nanangona fisafidianana sasany tsara indrindra izahay. Miaraka amin'izy ireo ianao dia hanana fahafaha-manao bebe kokoa hamoronana sary tsy manam-paharoa, noho izany dia mila fotoana hitsapana sy hahitana ny valiny fotsiny ianao.
Izany dia afaka mampiavaka ny kaontinao, noho izany ny fandaniana fotoana ampy hananana sary kalitao izay misy fiatraikany dia fampiasam-bola amin'ny ho avy, indrindra raha manomboka mahita ireo mpanaraka anao miakatra ianao.
Ahoana ny fanovana sary ho an'ny Instagram: Instasize
Manomboka amin'ny fampiharana iray izahay mifantoka tsara amin'ny sary apetrakao amin'ny Instagram izy io. Amin'ity tranga ity dia afaka mamorona collage ianao na mametraka sivana, sisintany, manova ny haben'ny sary, manampy lahatsoratra ...
Tsy dia misy mistery loatra ary mora ny miara-miasa, na dia hoe komposisialy be pitsiny kokoa aza no tadiavinao dia mety tsy ho ampy izany.
Ity rindranasa ity dia iray amin'ireo tsara indrindra hanovana sary ho an'ny Instagram, na ho an'ny fampiasana hafa amin'ny ankapobeny. Hanana sivana sy fitaovana mahazatra ianao, fa ny hafa koa izay hanova tanteraka ny sarinao.
Na dia maimaimpoana aza ity app ity dia misy kinova voaloa miaraka amin'ny fitaovana mandroso kokoa, preset sy antsipiriany hafa izay, raha mahomby ianao, dia mendrika ny hisoratra anarana.
Izy io dia mitovy amin'ny VSCO, saingy manana tombony ny fahaizana manitsy ny tonony, manana sivana betsaka kokoa ary manatsara ny sary amin'ny antsipiriany kely indrindra. Manana ny kinova maimaimpoana ianao, saingy misy lafy ratsy koa izay miharihary fa mihatsara amin'ny teo aloha.
Inona no tsara kokoa amin'ny Snapseed? Ao anaty manolotra anao ny fanitsiana HDR, raha afaka mampiditra fanazavana dia misy endriny bebe kokoa ...
Ahoana ny fanovana sary ho an'ny Instagram: Lightroom
Ity fampiharana ity dia ahafahanao mamerina mamerina sary amin'ny sehatra matihanina. Raha ny tena izy dia feno tokoa ka azonao atao ny manamboatra ireo fanitsiana ireo amin'ny alàlan'ny programa amin'ny solosaina. Noho io antony io dia maro no manome fotoana ny fampiharana.
Ary inona no azonao atao hanovana sary ho an'ny Instagram? Hanombohana, Azonao atao ny mamerina ny hazavana sy ny loko, ary koa ny masontsivana hafa amin'ny sary hanatsarana ny jiro, ny maranitra sns. Manana preset ianao ary afaka mamorona anao manokana.
Photoshop dia iray amin'ireo programa lehibe indrindra amin'ny fanitsiana sary ary, mazava ho azy, tsy maintsy nanana ny kinova findainy izy io. Amin'ity tranga ity dia tena tsara ilay fitaovana satria mamela anao hanao praktika mitovy amin'ny solosaina.
Eny, Ho an'ireo efa manana traikefa, satria ho an'ny vao manomboka ny fitaovana dia sarotra be ampiasaina, farafaharatsiny mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny sarinao.
Ary alohan'ny anontanianao azy dia manana kinova roa izy io, ny iray maimaim-poana ary ilay iray aloa. Ankoatr'izay, manana rindrambaiko ho an'ny smartphone izy ary fampiharana hafa ho an'ny takelaka. Izy ireo dia tena mitovy amin'ny iray hafa, fa mifantoka amin'ny fanatsarana ny azo ampiasaina amin'ny fitaovana roa izy ireo.
Raha manana kaonty Instagram mifantoka amin'ny sakafo ianao, dia ity app ity no mety ho tsara indrindra aminao. Ary mifantoka amin'ny fanatsarana ny sarin'ny lovia sy ny sakafo izy io.
Azonao atao ny mahita azy amin'ny Android sy iOS ary maimaim-poana. Inona no azonao atao amin'izany? TSARA hahita sivana ho an'ny sary sakafo ianao (manana maherin'ny 20 isan-karazany izy io) ary koa fitaovana hafa toy ny manjavozavo, manova ny sary, mamirapiratra hanazava ny sakafo rehefa maka sary ...
Ao amin'ny Google Play sy ao amin'ny App Store dia misy fampiharana maro hafa. Ny torohevitray dia ny manandrana maro hahita izay mety indrindra amin'ny fomba tadiavinao. Manoro hevitra hafa ve ianao raha te-hanitsy sary ho an'ny Instagram?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ahoana ny fanovana sary ho an'ny Instagram